Amazon assistant | ရှိ Super Alexa မုဒ်နှင့် အခြားသော လျှို့ဝှက်လုပ်ဆောင်ချက်များ Androidsis
Super Alexa မုဒ်နှင့် Amazon assistant ရှိ အခြားသော လျှို့ဝှက်လုပ်ဆောင်ချက်များ
Nerea Pereira | 27/04/2022 13:49 | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 27/04/2022 13:55 | NOTICIAS, လဲ tutorial
Alexa သည် အကောင်းဆုံးများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်လာသည်။ စမတ်လက်ထောက်များ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ၀ကို မြှင့်တင်ပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသောကြောင့်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ်၊ အကြောင်းအရာအများအပြားအတွက် အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့အရာများကို တောင်းဆိုသည့်အတိုင်း စျေးဝယ်စာရင်းတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ၀ကို တိုးတက်စေမည့် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသည်။
Alexa အသံဖြင့် အမိန့်ပေးမှုများကြောင့် စိတ်ထဲတွင် မည်သည့်အရာအတွက်မဆို assistant ကိုမေးနိုင်သည်၊ Alexa တွင် အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော လျှို့ဝှက်မုဒ်များရှိကြောင်း သိလိုပြီး ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ပုံကို ရှင်းပြပါမည်။ Super Alexa မုဒ်နှင့် သင့်အား အံ့အားသင့်စေမည့် အခြားရွေးချယ်စရာများ
1 Super Alexa မုဒ်နှင့် Amazon assistant ဝှက်ထားသော အခြားလျှို့ဝှက်မုဒ်များ
1.2 super Alexa မုဒ်
1.3 Madrid နှင့် Galician မုဒ်
3 အခြား Alexa မုဒ်များ
Super Alexa မုဒ်နှင့် Amazon assistant ဝှက်ထားသော အခြားလျှို့ဝှက်မုဒ်များ
မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် Alexa ကိုတောင်းဆိုရန် အသံအမိန့်ပေးချက်များကို အသုံးပြုလေ့ရှိသော သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်၊ ၎င်းတို့သည် အိမ်တွင် မီးအဖွင့်အပိတ်လုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပြီးဖြစ်သည်။ စကားအနည်းငယ်ပြောရုံသာမက အခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်များစွာအပြင် တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်မိစေရန် လက်ထောက်အား တောင်းဆိုပါ။
Alexa စွမ်းဆောင်နိုင်သမျှအားလုံးကို သိလိုပါက "Alexa၊ သူမ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ" ဟု တိုက်ရိုက်မေးပြီး သူမကို တိုက်ရိုက်မေးပါ။ သို့မဟုတ် Alexa ပါရှိသည့်မုဒ်များအကြောင်းကိုလည်း သင်မေးနိုင်သည်၊ ၎င်းအတွက် သင်သည် "Alexa၊ သင့်တွင် မည်သည့်မုဒ်များရှိသနည်း" ဟုသာမေးနိုင်သည်။ Alexa တွင် သော့ချက်စာလုံးတစ်ခုမှတစ်ဆင့် သင်စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သည့် လျှို့ဝှက်မုဒ်အမြောက်အမြားရှိသည်ကို သင်တွေ့ရပါမည်။ ယနေ့ Alexa ၏အကောင်းဆုံးမုဒ်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့သင့်ကိုပြသထားသည်။
Alexa ၏ဘောလုံးမုဒ်ကိုအသက်သွင်းရန်အတွက်သင်သည်ဘောလုံးနှင့်ပတ်သက်သည့်ကြိုတင်အသိပညာအချို့ရှိရန်လိုသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းကိုအသက်သွင်းရန်အတွက်သင်သိသမျှကိုစမ်းသပ်ရန်မေးခွန်းလွှာကိုဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် Alexa သည်ဤမုဒ်ကိုဖွင့်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
လိုအပ်သော အသိပညာမရှိလျှင် ဤမေးခွန်းလွှာကို ဖြေဆိုရန်မှာ လွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပေ။ Alexa မေးသော မေးခွန်းလေးခုအနက် အနည်းဆုံး နှစ်ခုကို မှန်ကန်စွာ ဖြေဆိုရပါမည်။ အဲဒါကို နားလည်ရင် Alexa ဟာ ဘောလုံးဝေဖန်သူ တစ်ယောက်လို ဟောပြောမှု စတင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်သည် ဤမုဒ်ကို အသက်သွင်းလိုပါက "Alexa၊ ဘောလုံးမုဒ်ကို စသုံးပါ" ဟုသာ ပြောရပါမည်။
super Alexa မုဒ်
ဤမုဒ် Alexa တွင် အထင်ရှားဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။. ၎င်းကိုအသက်သွင်းလိုပါက "Alexa၊ super Alexa မုဒ်ကိုဖွင့်ပါ" ဟုသာပြောရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပေးထားခြင်းဖြင့်၊ Amazon assistant သည် ၎င်းသည် အထူးလျှို့ဝှက်မုဒ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း တုံ့ပြန်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို အသက်သွင်းရန်အတွက် သင်သည် ကုဒ်တစ်ခုကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။
လက်ထောက်က သင့်အား ဤအရာကို ပြောပြသောအခါ၊ သင်သည် အောက်ပါကုဒ်ကို ပြောခြင်းဖြင့် သင်သည် "Alexa၊ အပေါ်၊ အပေါ်၊ အောက်၊ အောက်၊ ဘယ်၊ ညာ၊ ဘယ်၊ ညာ၊ B၊ A၊ စတင်"။ သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ ၎င်းသည် ဗီဒီယိုဂိမ်းဟောင်းမှ လှည့်ကွက်တစ်ခုကဲ့သို့ အဓိကပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပုံရသည်။ သင်မှန်ကန်စွာဖြေဆိုပါက Alexa က ""ဒင်၊ ဒင်၊ ဒင်၊ ကုဒ်မှန်သည်၊ အပ်ဒိတ်များကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နေသည်". ဒါပေမယ့် ပေါင်းစပ်မှုမှာ အမှားလုပ်မိရင် ဒါမှမဟုတ် မှန်ကန်စွာ မပြောဘူးဆိုရင်၊ Alexa က ကုဒ်ကို နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်လုပ်ဖို့ ပြောပါလိမ့်မယ်။
Madrid နှင့် Galician မုဒ်
စပိန်အပြင် Alexa သည် စပိန်၏ အခြားဒေသများ၏ လေယူလေသိမ်းကိုလည်း သိသည်။။ လောလောဆယ် ၎င်းတွင် မက်ဒရစ်မုဒ်နှင့် ဂါလီစီယံမုဒ်တို့ ပါရှိသည်။ ဤမုဒ်များထဲမှ တစ်ခုကို စသုံးရန်၊ ""Alexa၊ မက်ဒရစ်မုဒ်ကို ဖွင့်ပါ" သို့မဟုတ် Alexa၊ ဂါလီစီယံမုဒ်ကို စဖွင့်ရန်" အသံဖြင့် အမိန့်ပေးရုံသာ တောင်းဆိုရပါမည်။
ယခင်တစ်ခုကဲ့သို့ပင်၊ Alexa သည် Madrid သို့မဟုတ် Galicia နှင့် ပတ်သက်၍ သင်မှန်ကန်စွာဖြေဆိုရမည့်မေးခွန်းများစွာကို အဆိုပြုမည်ဖြစ်သည်။ သင်ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် Alexa သည် အထူးသီချင်းဖြင့် မုဒ်ကို အသက်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။ Alexa မေးခွန်းများဖြင့် ဤဒေသနှစ်ခုတွင် သင့်ကိုယ်သင် စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
သို့သော် မတူညီသောဒေသများ၏ လေယူလေသိမ်းကို ထည့်သွင်းနိုင်သည့်အပြင် Alexa သည်လည်း အခြားအိမ်ထောင်စုဝင်များကို တုပပြီး အဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုနိုင်သည်။
Amazon ၏ အသံလက်ထောက်တွင် "Alexa၊ activate mother mode" ဖြင့် သင်ဖွင့်နိုင်သော မိခင်များအတွက် အလွန်ပုံမှန်စကားစုများ ပါဝင်သည်။ ဒါပေမယ့် မင်းအဲဒါကို စဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် Alexa မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေရမယ်ဆိုတာ သတိရပါ။
“Alexa၊ ဖခင်မုဒ်ကိုဖွင့်ပါ” ဟုပြောခြင်းဖြင့်လည်း သင်စဖွင့်အသုံးပြုနိုင်သည့် ဖခင်မုဒ်သည် ပျောက်ဆုံးနေမည်မဟုတ်ပေ။ ဤမုဒ်အတွက် သင်သည် အချို့သောမေးခွန်းများကို မှန်ကန်စွာဖြေဆိုရန် မလိုအပ်သော်လည်း Alexa မှပြောပြမည့် သဲလွန်စများကိုအခြေခံ၍ သင်ကိုယ်တိုင် ခန့်မှန်းရမည့် လျှို့ဝှက်ကုဒ်ကို သင်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်။
အမှန်ပင်၊ ချစ်ခင်ရသော အဖွားမုဒ်ကို လက်ထောက်က တုံ့ပြန်လိမ့်မည်- "Alexa၊ အဖွားမုဒ်ကို ဖွင့်ပါ" ဟု ပြောခြင်းဖြင့် သင်ဖွင့်ထားရမည့် ချစ်လှစွာသော အဖွားမုဒ်ကို မပျက်မကွက်နိုင်ပါ။အဖွားမုဒ်သည် အထူးအထူးမုဒ်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အဘိုးအဘွားများအားလုံးကို ဂုဏ်ပြုလိုသော်လည်း ကုဒ်အမှန်ကို ပြောပြနိုင်မှသာ ၎င်းကို အသက်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အရိပ်အမြွက်ရရန်၊ အဘွားမုဒ်ကို စတင်ရန် လျှို့ဝှက်ကုဒ်က ဘာလဲ၊ ငါ့ကို ပြောပြပါ။ ၎င်းမတိုင်မီတွင် "Alexa၊ အဖွားမုဒ်ကိုဖွင့်ရန် ကုဒ်ကဘာလဲ" ဟုပြောခြင်းဖြင့် သင့်အား ကုဒ်ကိုပြောပြရန် သူ့ကိုမေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကုဒ်ကို Heidi ၏အဘိုး၊ အကျော်ကြားဆုံးနှင့် အချစ်ဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် ကုဒ်ကို မှုတ်သွင်းထားကြောင်း Alexa က အဖြေပေးလိမ့်မည်။ ယခု Alexa သည် သင့်အား အဖွားမုဒ်ကို အသက်သွင်းရန်အတွက် မှန်ကန်စွာဖြေဆိုရန် လိုအပ်သည့်မေးခွန်းတစ်ခု မေးပါမည်။
အဖွား၊ ဖခင် သို့မဟုတ် မိခင်မုဒ်အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် ဒေသအားလုံးတွင် မရရှိနိုင်သော်လည်း ကလေး၊ ကလေး သို့မဟုတ် ဆယ်ကျော်သက်ကဲ့သို့သော မိသားစုမုဒ်များကဲ့သို့သော အခြားမိသားစုမုဒ်များကိုလည်း သင်တွေ့နိုင်သည်။
ငါတို့ ဒီဟာကို ပြီးသွားတယ်။ alexa လျှို့ဝှက်မုဒ်များစာရင်း love mode နှင့်အတူ၊ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော်လည်း၊ အလွန်အမိုက်စားဖြစ်သည်။ Alexa သည် သင်လိုချင်သည့်အခါတွင် အလွန်ရိုမန်တစ်ဆန်နိုင်ပြီး သူမ၏ကိုယ်ပိုင် virtual heart ရှိကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ ၎င်းကိုအသက်သွင်းရန်အတွက် သင်သည် "Alexa၊ အချစ်မုဒ်ကိုဖွင့်ပါ" ဟုသာပြောရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဖန် Amazon ၏ အသံအကူသည် သင့်အား မေးခွန်းအနည်းငယ်မေးမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို အသက်ဝင်စေရန်အတွက် သင်သည် အနည်းဆုံးမေးခွန်းလေးခုအနက် အနည်းဆုံးသုံးခုကို မှန်ကန်စွာဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး အကြိမ် မရနိုင်လျှင် စိတ်မပူပါနှင့်၊ သင်သည် လိုအပ်သလောက် အကြိမ်များစွာ ထပ်မံကြိုးစားနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် အလွန်ချိုမြိန်သော အခိုက်အတန့်ဖြစ်ကြောင်း သတိရပါ။
အခြား Alexa မုဒ်များ
Amazon သည် ၎င်း၏ အသံလက်ထောက်တွင် အင်္ဂါရပ်များ ပိုများလာနေသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ဒေသပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲနေသော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးကို သင်အသုံးပြုနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ၊ လက်တင်အမေရိကတွင်၊ သင်သည် ဤ Alexa မုဒ်များကို ဝင်သုံးနိုင်သည်- Chilango မုဒ်၊ Yucatecan မုဒ်၊ Norteño မုဒ်၊ မက္ကဆီကန်မုဒ်၊ Taquero မုဒ် သို့မဟုတ် ကာရေဘီယံမုဒ်။
သောကြောင့် အကယ်၍ သင်သည် စပိန်တွင် နေထိုင်ပါက ၎င်းတို့ကို အသက်သွင်းရန် ကြိုးစားသောအခါတွင် Alexa သည် ၎င်းတို့ထံ သင်ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပါ သို့မဟုတ် သင့်ဒေသတွင် ၎င်းတို့ မရရှိနိုင်ပါဟု ဖြေကြားပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပါမုဒ်များကို သင်အသက်သွင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Super Alexa မုဒ်နှင့် Amazon assistant ရှိ အခြားသော လျှို့ဝှက်လုပ်ဆောင်ချက်များ
ဘရောက်ဆာတွင် ယနေ့တွေ့မြင်သမျှအားလုံးကို ဖျက်နည်း
အမေများနေ့အတွက် အကောင်းဆုံး ဂုဏ်ပြုလွှာများ